आईपीएल २०१८ मा क-कसले रचे नयाँ कीर्तिमान?
अभिजीत श्रीवास्तव (बिबिसी)
मुम्बई, जेठ १५
आईपीएल २०१८ को फाइनलमा हैदराबादलाई हराउँदै चेन्नईले उपाधि जितेपछि एउटा नयाँ रेकर्ड बनेको छ। जुन पछिल्लो १० वर्षमा समेत बनेको थिए।
च्याम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स र सनराइज़र्स हैदराबाद यो सीजनमा चार पटक एक आपसमा खेलेका थिए। दुई पटक समूह चरढणमा, तेस्रो पटक प्लेअफ़मा र चौथो पटक फाइनलमा भिडेका थिए। सबै चारै खेलमा चेन्नई सुपरकिंग्सले हैदारावादलाई हराउँदै उपाधि उचालेको हो।
यसका साथ आईपीएलको एकै सीजनमा कुनै पनि टीममाथि चारै पटक जित्ने र हार्नेको नयाँ कीर्तमान बनेको छ। हेरौ आइपिएलको ११औं संस्करणमा कस्ता कस्ता कीर्तिमान बने।
गोल्डन ब्याट कसको नाममा
१७ खेलबाट ८ अर्धसतकसहित ५२.२० औषतमा ७३५ रन बनाउने न्यूजिल्याण्डका कप्तान केन विलियमसन आईपीएल २०१८ मा सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यान बनेका छन्।
वर्ष २०१६ मा विराट कोहली (९७३) र डेविड वार्नर (८४८) पछि एकै सीजनमा बनाएको यो तेस्रो सर्वाधिक योगफल हो। यस प्रतियोगितामा सर्वाधिक अर्धशतक पनि उनैको नाममा छ।
यस्तै दिल्ली डेयरडेविल्सका ऋषभ पन्त (६८४) रन बनाउँदै दोस्रो भएका छन् भने बेंगलुरूका लोकेश राहुल (६५९) रन बनाएर तेस्रो सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी भएका छन्।
आईपीएल २०१८ मा भएका सतक
शेन वाटसनको २ सतकसँगै यो सीजन कुल पाँच शतक प्रहार भएका छन्।
दिल्लीका ऋषव पन्त, चेन्नईका अम्बबाति रायडू तथा पञ्जावका क्रिस गेलले यो सिजन सतक प्रहार गरे।
३. ऋषभ पन्त प्रतियोगितामा सबैभन्दा ठूलो पारी खेल्ने खेलाडी बनेका छन्। उनले सनराइज़र्स हैदरावादविरूद्ध ६३ बलमा नटआउट १२८ रन बनाएका थिए।
यो सिजन ६८४ रन बनाएका दिल्लीका ऋषभ पन्तले सर्वाधिक छक्का प्रहार गरेका छन्। उनले १४ खेलबाट ३७ छक्का प्रहार गरेका हुन्। यस्तै दोस्रो नम्बरमा शेन वाटसनले १७ खेलबाट ३५ छक्का प्रहार गरे। यस्ते ३४ छक्का प्रहार गरेका चेन्नई सुपरकिंग्सका अम्बाति रायडू तेस्रो स्थानमा छन्। यस्तै सर्वाधिक चौका प्रहार गर्ने ब्याट्म्यान पनि दिल्लीका ऋषभ पन्त नै भएका छन्। उनले १४ खेलबाट ६८ चौका प्रहार गरेका थिए। यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेका लोकेश राहुलले ६६ चौका प्रहार गरे भने तेस्रो नम्बरमा रहेका केन विलियमसनले ६३ चौका प्रहार गरे।
सर्वाधिक औषत रनमा धोनी अगाडि
यो प्रतियोगितामा सर्वाधिक औषत रन बनाउनेमा चेन्नई सुपरकिंग्सका कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अगाडि देखिएका छन्।
उनले खेलेका १५ खेलमा७५.८३को औषतमा ४५५ रन बनाए। नौ पटक नटआउट पविलियन रहेका धोनी रन औसतमा प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी बने।
कसले जित्यो गोल्डेन बल
अस्ट्रेलियाका एन्ड्र्यू टाईले किंग्स इलेवन पञ्जाबका लागि १४ खेल खेल्दै १८.६७ को औषतमा सर्वाधिक २४ विकेट लिए।
दोस्रो स्थानमा रहेका हैदरावादका राशिद ख़ान २१ र तेस्रो स्थानमा रहेका हैदारावादकै सिद्धार्थ कौल २१ विकेटलाई पछि पारेका हुन्।
बेस्ट बलिङ फिगर
किंग्स इलेवन पञ्जाबका अंकित राजपूतले मात्र ११ विकेट लिए पनि सनराइजर्स हैदराबादविरूद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट बलिङ फिगर हुने खेलाडी बने। उनले यस खेलमा ४ ओभर बलिङ गर्दै १४ रन दिएर पाँच विकेट लिए। यो सँगै उनले एकै खेलमा पाँच विकेट लिने ११ औं संस्करणको एक मात्र खेलाडी बने।
साथै उनको यही प्रदर्शन प्रतियोगिताकै सर्वश्रेष्ठ बलिङ फिगर हो।
अल टाइम बेस्ट
आईपीएलका सबै ११ सिजनमा गरी सर्वाधि रन बनाउनेमा शुरेश रैना अगाडि छन्। फाइनलमा ३२ रन बनाएका रैना आइपिएलको ५ हजारी क्लबबाट मात्र १५ रनले पछि छन्। उनले १७२ खेलबाट ४९८५ रन बनाए। यस्तै विराट कोहलीले४९४८ रन बनाउँदै दोस्रो नम्बरमा आएका छन्।
यस्तै १५४ विकेट लिएका लासिथ मालिङ्गाको रेकर्ड अझैसम्म कसैले तोड्न सकेका छैनन्।
यस्तै क्रिश गेलले सर्वाधिक ६ सतक बनाएका छन्। यसअघि ५ सतक प्रहार गरेका गेलले यसपटलक पञ्जावका लागि सतक प्रहा गरे। यस्तै यो प्रतियोगितामा २७ छक्का प्रहार गरेका उनी २९२ छक्कासहित अग्र स्थानमै छन्।
जसले एक खेल पनि खेल्न पाएनन्
यो प्रतियोगितामा अक्सनबाट लिएका ४० खेलाडीले एक खेल पनि खेल्न पाएनन्।
हेर्नुहोस् कुन टिमबाट कसले खेल्न पाएनन्।
चेन्नई सुपरकिंग्सः चैतन्य बिश्नोई, डेविड विली, कनिष्क सेठ, क्षितिज शर्मा, मोनू कुमार र नारायण जगदीशन।
सनराइजर्स हैदराबादः बिपुल शर्मा, मेहदी हसन, सचिन बेबी, टी नटराजन र तन्मय अग्रवाल।
दिल्ली डेयरडेविल्सः जयन्त यादव, मनजोत कालरा, गुरकीरत सिंह मान र सयान घोष।
कोलकाता नाइटराइडर्सः कमलेश नागरकोटी र इशांक जग्गी।
मुम्बई इन्डियन्सः एडम मिल्ने, आदित्य तारे, अनुकूल राय, मोहम्मद निधीश, मोहसिन ख़ान, राहुल चाहर, तेजिन्दर सिंह, सौरभ तिवारी, शरद लुम्बा र सिद्धेश लाड।
किंग्स इलेवन पञ्जाबः प्रदीप साहू, मयंक डागर, मञ्जूर डार र बेन ड्वौर्शुइस।
राजस्थान रोयल्सः आर्यमन बिड़ला, दुष्मंता चामीरा, जतिन सक्सेना, सुदर्शन मिथुन र जहीर खान।
रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरः अनिकेत चौधरी, अनिरुद्ध जोशी, नवदीप सैनी र पवन देशपाण्डे।
प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ १५, २०७५ ०८:२४:३२
काठमाडौंको बीचमा दुई विशाल पार्क
‘राष्ट्रवादबारे पानाका पाना पाठ पढाउन जरुरी छैन’
के हो ‘सेक्सुअल ह्र्यासमेन्ट’? अमेरिकामा पीडितले न्याय कसरी पाउने ?
चुरे संरक्षण : विद्यमान चुनौतीहरू
अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीका समस्या र जोडिएका प्रसंग
डा .भरत राज पौडेल
सबु सुवेदीको उपन्यास ‘मञ्जूषा’ सार्वजनिक
‘स्ट्रङ र बेसर्म दुवै बनायो’